Floor Lamp, Table Lamp, Lamp umthunzi, LED samandla, Ubude Floor Lamp - amahle
Enemilenze Floor Lamp
Ubude bethuba Floor Lamp
1-5W LED samandla
6-12W LED samandla
18-24W LED samandla
Ikhanyisa angaphakathi yakho olwahluke, umyili Metal isibane sethu umgangatho. Bafake okuphambili ibe iikona kwaye alcoves, okanye abalekele ezimnandi, nendawo yokufunda komoya. Browse imveliso yethu kwezibane lwala maxesha kunye zemveli, ukususela iziyilo zesinyithi angqukuva kunye nezibane yaseMorocco-eziphefumlelweyo, ukuba izibane Metal ezintle, abade, izimbo ezibhityileyo.
High kwisimbo, enemilenze kumgangatho isibane nangoko ukongeza classiness nasiphi na isithuba! Sikhulise ikona okanye indawo enye ecaleni isofa lakho kwigumbi eziphilayo ukuze abe mavoko. Yenza ikhaya lakho ezimnandi kunye nezisombululo eqaqambileyo kwiqoqo yethu ukukhanyisa kwi amahle Light. Cinga izibane umgangatho kunye kugudiswa yesinyithi, izakhiwo enemilenze emithathu okanye iinkcukacha ngamaplanga.
izibane Table ake kakuhle urhwebo ngaphakathi umoya kwigumbi ngeendlela ngaphezu kwesinye. Bekunika ukukhanya apho ufuna khona njengoko idibanisa kwakhona nentwana ubuntu. Ezethu ziyafumaneka ukhetho ezininzi iindlela ukongeza kancinane extra umbala, ukuguda noburhabaxa kwakunye nokukhanya home.Metal yakho Uluhlu isibane, Wood itheyibhile isibane, USB itafile isibane ...
Modern kunye ecwebezelayo, oku Ubude Floor Lamp ukusuka amahle Ukukhanya wongeza style olumiyo kuzo naliphi na igumbi. Le isibane mihle kudala osisityebi, Ambience ezintle, yaye kabini njenge kwithala-tiered ezimbini, umnikelo ndawo ogqibeleleyo ngokubonisa iincwadi zakho, zitsha okanye ikwizakhelo zomfanekiso. Le kwishelufa kumgangatho isibane esebenzayo ezinamagama uya kukhangela ecaleni kakhulu kwisitulo yakho, isofa okanye nayiphi na enye isiziba impahla ekhayeni lakho.
Amahle Light Technology Co., LTD. yakhiwa 2015 kwaye Sise Shenzhen.Weare ngokujolisa ngokunikezela iintlobo izibane eziphathwayo endlwini ukuze customers.Justafter yethu unyaka omnye, siye sifumane ngempumelelo Customers yoMthengi ukuthembana kunye nokuphakama indumiso withexcellent umgangatho kunye price.Our completive nje kuphela ChinaMainland, kodwa eYurophu, eMelika kunye mpuma Asia.Most of ourcustomers ziye ulwalamano esinamandla, ukususela businesspartner eziqhelekileyo kwiqabane iqhinga ishishini. Ukuze ukudibana customersrequirements yethu, sakha umzalwana Light mveliso-Grand Champ LightingTechnology Co, Ltd kwi Huizhou. Ngale ndlela, iimveliso zethu kunye completiveprices ngaphezulu kunye neemveliso Range natyetyiswa, Ukusuka umqhubi LED ukuba izibane LED, ukususela lampparts ukuba Gqiba lamps.We na umthengisi of USA Target, WalMart kunye BBB.
Ngowe-2017, ngokweemfuno manycustomers, thina zokufunda amkele iposi orders.As kwi lineshopping akukho kuphela mayamkelwe China, kodwa zonke phezu iimveliso world.Nowour ithengiswa ngempumelelo kwi Amazon kunye Taobao, TMall.COM ke JD .com nomgangatho yethu elungileyo kunye namaxabiso, iphakheji especiallyour ezincinane bamkelwa abaxumi bethu.
Amahle Light, oko yourgoodly Khetha ze wenze ukukhanya yakho elungileyo!
Tsalela ngoku: + 86-0755 28684337